Qwixx: Mutambo Dice, Mazhinji Ekuwedzera - Gamepoint - Bhodhi uye Vhidhiyo Mitambo
Dzimwe nguva mitambo yebhodhi inoda kuve nyore, kana kukurumidza, kana kuti unoda zita rekupwanya ice. Qwixx naSteffen Benndorf ndeimwe yemitambo iyoyo: mitemo yakapusa, kukurumidza kuita, kunakidzwa kwakawanda. Kwete chete zvidhinha zvekutsiva zvinopa zvakatonyanya kukurudzira mumutambo wedhayisi, asi ikozvino zvakare mawedzero uye akasiyana.
Qwixx mutambo wemadhaisi naSteffen Benndorf uye wakaburitswa muna 2012 naNürnberger Spielkarten-Verlag. Mutambo uyu ndewevanhu vaviri kusvika vashanu uye unotora maminitsi gumi nemashanu pamutambo wega wega. Iyo nyaya yebudiriro yave kureba uye yakatanga zvine mbiri: muna 15 iyo Spiel des Jahres eV yakaisa mutambo wedhayisi Qwixx pane yekusarudzwa kwemutambo wegore - mukupedzisira makwikwi kubva kuAbacusspiele akahwina, kare ikako naHanabi naAntoine. Bauza.
Zvichakadaro, zvimwe zvekuwedzera zvakaonekwa zveQwixx. Nheyo yekutanga yemutambo yakachengetwa mune yega yega, kuitira kuti iwe ugone kukurumidza kuwana nzira yako mumitambo mitsva.
Qwixx: Maitiro ekutamba
Munhu mumwe nomumwe anogamuchira pepa remutambo. Pamupumburu wega wega pane munhu mumwechete anoshanda anokungurutsa dhayisi rese. Kune madhai maviri machena uye rimwe nerimwe dzvuku, yero, bhuruu negirinhi.
Munhu anoshanda anogona iye zvino kusvika kumichinjikwa miviri ita maererano nehurongwa hwavo. Kamwe iyo Musanganiswa wemadhizi maviri machena uyezve mumwe Kusanganiswa kwechena uye cube ine ruvara. Kurongeka uku kwakakosha chete kana munhu achida kuita michinjikwa miviri. Nekudaro, iwe unogona chete kutora mukana wekutanga kana yechipiri sarudzo. Kana munhu anoshanda asingakwanisi kana kuti asingadi kumaka bhokisi zvachose, vanofanira kudaro miss Maka nemuchinjikwa. Pakupera kwemutambo, michinjikwa isiriyo inounza minus mapoinzi mashanu imwe neimwe.
Wese munhu angomira anogona kutara huwandu hwemadhizi machena. Kana munhu asingade kana kusada kana kusakwanisa kukaka bhokisi, haafanire kutara vhoti isiri iyo.
Minda inogona kurukwa kana uchimaka; mushure mekutsvuka 2 unokwanisa kukaka tsvuku 5. Zvisineyi, nzvimbo dzakarukwa dzinogona kusazotariswa mushure.
Pedzisa mutsara uye zvibodzwa
Nhamba dziri kurudyi inzvimbo yakakosha.Idzi dzinogona kungoiswa chiratidzo kana dziri mumutsara yatova michinjikwa mishanu zvakaitwa. Kana munhu akayambuka nhamba iyi kutanga, anoyambukawo iyo zvakananga Mubatanidzwa kukiya uye nokudaro anopedzisa nhevedzano.
Kuvhara mutsara kunoshanda kune vese vanhu uye hapana mimwe michinjikwa inogona kuitwa mumitsara yakavharwa. Rudzi runofa mumutsara rinobva rabviswa mumutambo.
Pakangovharwa mitsara miviri, mutambo unopera. Pamutsara wega wega unoverenga michinjikwa yawakakwanisa kugadzira uye kuisa mapoinzi anoenderana. Ticked makiyi ekiyi anoverengerwa pamutsara unoenderana. Iwe unogona kuona pazasi pemitsetse yemavara kuti mapoinzi mangani aunowana pamuchinjiko wega wega. Ani nani akakwanisa kuunganidza zvibodzwa zvakawanda akahwina.
Mutambo uyu unoperawo kana munhu mumwe chete aita zvibodzwa zvina. Shandisa misthrows, saka usazvishandise zvakareruka.
Qwixx: Ndezvipi zvekuwedzera zviripo?
Qwixx yakaburitswa makore gumi apfuura (2012) uye zvimwe zviri kuwedzera zvishoma nezvishoma zvakasiyana uye Kuwedzeredzwa akaonekwa.
Sezvo zvakasiyana Qwixx Deluxe (yepamusoro-soro, kusanganisira dhizi bhodhi mubhokisi), Qwixx XL (chinyorwa chikuru chemutambo), Qwixx: Mutambo wemakadhi (inotambwa nemakadhi pachinzvimbo chedhayisi), Qwixx: The Duel (musiyano wevanhu vaviri), Qwixx Characters (zvichigere, munhu mumwe nomumwe anogamuchira kadhi yemunhu ane unyanzvi hunokosha hwavanogona kushandisa panguva yemutambo), uyewo Qwixx: Pabhodhi (musiyano nebhodhi rekuwedzera remutambo).
Asi ini ndinoda kupinda mune zvakadzama nezve edzedzero pano.
Ngatitangei neQwixx yakasanganiswa. Uku kuwedzera kunouya nemabhuroki maviri akasiyana emitambo pane iyo Zahlen kana väriä zvakasanganiswa.
apo nhamba pad shanduko huru ndeyokuti nhamba, kubva kuruboshwe kuenda kurudyi, hadzichawedzeri kana kudzikira zvakafanana. Pane kudaro vakavhengana. Zvisinei, mitsara ichiri monochromatic. Iwe hauchavhara mutsara nembiri kana gumi nembiri, asi neiyo nhamba iri kurudyi.
apo color block hapasisina mitsara yemavara akafanana, asi mutsara wega wega une nzvimbo ina dzemavara. Nhamba dzakarongwa, zvakare zvakajairika. Kana iwe ukazadza mutsara panguva yemutambo, iyo inofa inoenderana nekurudyi ine mavara square inobviswa mumutambo. Semuenzaniso, kana iwe ukazadza mutsara wepamusoro, iyo dzvuku kufa inobviswa mumutambo uye iwe haugone kuita michinjikwa mumutsara wepamusoro. Nekudaro, iwe unogona kuramba uchimaka zvikweya zvitsvuku mune mimwe mitsara ine machena madhaisi.
NeQwixx yakasanganiswa, zvinokurumidza kuve pachena kuti mutambo hauchakwanisa kuridzwa nekukasira semutambo wekutanga. Izvi zvinonyanya kukonzerwa nekuti iyo minda inotariswa kutanga inofanirwa kutsvakwa (sezvo isingacharongedzerwe mukutevedzana). Izvi zvakanyanya kukosha nebhuroko renhamba pane nebhuroko reruvara. Kunyangwe iri shanduko inonakidza, Qwixx yakasanganiswa ndeimwe yeasina simba ekuwedzera kwandiri. Kunyanya nekuda kwenguva refu yekutamba yakakonzerwa nekutsvaga kwenhamba.
Iyo Qwixx Big Points game board yakakura kudarika base game. Izvi zvakanyanya nekuti mitsara yebhonasi miviri anopa; pakati pevaviri vokutanga nevekupedzisira vaviri. Pakupera kwemutambo unowana mapoinzi epamusoro pemichinjikwa gumi neshanu pamutsara, pachinzvimbo chegumi nembiri sepakutanga.
Kana wamaka nhamba uye wokungurutsa nhamba imwe cheteyo zvakare, unogona kukaka bhokisi riri mumutsara webhonasi. Kana iwe ukayambuka tsvuku 2 uye uchizoyambuka imwe tsvuku 2 gare gare, unogona zvakare kuyambuka tsvuku / yero 2 mumutsara webhonasi. Iwe unogona zvakare kusvetuka minda mumutsara webhonasi, asi hauchakwanisa kuamaka mushure. Minda yebhonasi haiverengeki kana zvasvika pakuva nemichinjikwa yakakwana kuvhara mutsara. Nekudaro, iyo bhonasi mutsetse unoverengerwa kana uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge rwuri zvibodzwa yemitsara miviri yakatarisana. Kana munhu anoshanda achikwenya imwe chete bhonasi ndima, havafanirwe kukanda zvisirizvo.
Kana iwe usinganetseki kuti mabhuroki emitambo akakurisa kune yekirasi mutambo bhokisi, Big Points inopa inonakidza yekuwedzera. Nemusara wekuwedzera, kukanda kaviri kunogona kuuya kamwe kamwe kunobatsira. Sezvo mutsara webhonasi uchiverengerwa kune ese mavara mitsara, zvinogona kuita zvine musoro kutarisa zvakanyanya pamitsara iyi.
Mutambo wepakutanga unodiwa kuQwixx Yakabatanidzwa, chitubu chitsva kubva muna 2019. Kunobva: NSV
Qwixx yakabatana inouya nemabhurocha maviri akasiyana emitambo: masitepisi uye cheni. Manotsi akateerana ane mavara kubva kuA - E mukona yepasi. Pakugovera, iva nechokwadi chokuti munhu mumwe nomumwe awana tsamba yakasiyana.
At Stair Variant iwe unotamba mutambo semazuva ese, hapana chakakosha chinoshandura mutambo wacho. Chiri kushamisa, zvisinei, ndechekuti munda wakaganhurwa muchikamu chimwe nechimwe. Kana uchirova, iwe hausi kungoisa mitsara mina mina, asiwo mambakwe eminda yeminda. Aya masitepisi akanyanya kukosha nekuti anopihwa kaviri.
At chain variant, minda miviri yakasimudzwa yakabatana kune imwe neimwe. Paunenge uchinge wamaka rimwe remabhokisi maviri, unofanirawo kutara bhokisi rakabatana. Ndizvo chete zvitsva. Nekudaro, izvi zvinovhura sarudzo nyowani kwauri uye zvakare zvinokumisa iwe panguva imwe chete. Kune rimwe divi, iwe unogona ikozvino kusvetuka minda nekuti unogona zvakare kuitarisa gare gare uchishandisa cheni basa. Parizvino, iyi ndiyo chete nzira yekumaka minda yakasvetuka. Kune rumwe rutivi, muchinjikwa mumutsara mumwe zvino unogona kuvharidzira mumwe mutsara. Semuenzaniso, kana iwe watove kure zvakanyanya mumutsara mutsvuku asi usati wava mune yero, munda wetani mumutsara mutsvuku ungave chipingamupinyi kwauri.
Yakabatanidzwa ndeimwe yeangu Qwixx andinoda. Nepo minda yemasitepisi ichitiyeuchidza nezveQwixx Big Points, minda yemaketani inounza akawanda akasiyana. Iwe zvino unoyedzerwa kusvetuka mamwe minda uye uchivimba nekuipinda mushure meiyo ketani basa. Zvakare, chokwadi chekuti munhu wese anoshandisa dhizaini yakasiyana inovimbisa kuti munhu wese anoita mamakisi akasiyana uye anoshandisa nzira dzakasiyana.
Qwixx Bonus inouyawo nezvirongwa zviviri zvakasiyana zvemutambo. Side A ine mamwe masikweya akataridzwa uye pazasi pemavara mitsara iwe unogona kuona mavara ebhonasi masikweya. Kana ukamaka bhokisi rine muganhu, unoita muchinjikwa wakananga mu Bonus nzvimbo bar. Zvinoenderana neruvara rwawamaka ikozvino, unoita mumwe muchinjikwa mumutsara wemavara unoenderana. Semuenzaniso, kana ukayambuka tsvuku 2 (iyo yakatsanangurwa), unoita muchinjikwa mumutsara webhonasi. Izvi zvinogara zvichiitika pasina mikaha kubva kuruboshwe kuenda kurudyi. Kana ukayambuka munda weyero ipapo, unoita muchinjikwa wakananga mumutsara weyero, mune imwe ndima inobvira. Heano zvakare chain reactions zvinogoneka - i.e. bhonasi muchinjikwa anogona zvechokwadi kutungamirira mamwe bhonasi michinjikwa.
Pachirongwa B une minda yebhonasi mishanu: denderedzwa, rhombus, sikweya, octagon uye nyeredzi. Chiratidzo chega chega chinooneka kaviri pabhodhi remutambo uye kana ukangomaka mativi ese echiratidzo, bhonasi inova inoshanda. Pano, mabhonasi akananga anogona kusiyaniswa kubva kumabhonasi anongoshanda pakupera kwemutambo.
Iwe unoimutsa denderedzwa, iwe unoita michinjikwa miviri zvakananga mumutsara wemavara umo iwe une michinjikwa mishoma (kunze kwekunge mutsara wakavharwa, ipapo bhonasi inopera). Mu Rhombus unomaka muchinjiko unotevera unobvira zvakananga mumutsara wega wega.
Das square inopeta kaviri mapoinzi pakupera kwemutambo kumutsara nemichinjikwa mishoma. The octagon inokupa 13 bhonasi mapoinzi. Unayo here? nyeredzi activated, haubvisi mapoinzi ekupotserwa kukanda. Kana iwe ukayambuka kubva kune yechina misstrow mukati memutambo, mutambo uchiri kupera zvakananga.
Mabhuroki ese ari maviri anounza diki diki kumutambo, asi anogona kuve nekukanganisa kukuru pamapoinzi uye zvibodzwa. Ini ndinoda chirongwa cheA zvishoma zvirinani pano, sezvo bhonasi michinjikwa ichipa akawanda mikana. Kugadzira chain reactions kunyanya kunonakidza. Iyo B chirongwa haina hazvo kushata, asi haina kuswedera kune imwe mutsauko kwandiri. Iwo mabhonasi anogona kushandura mutambo uye chiyero zvakare, asi pane kuomarara. Saka minda yebhonasi yakafanana kune vanhu vese. Ndingadai ndakazviona zvichinyanya kufadza kana minda yebhonasi pazvirongwa yakanga yakasiyana, sezvakaitika kune mamwe akasiyana.
Qwixx Longo inomira pachena mune iyi rondedzero sezvo isiri yekuwedzera asi mutambo kana musiyano wayo. Panzvimbo pemadhayi ane mativi matanhatu, iwe zvino wave kutamba nemadhizi ane mativi masere. Panzvimbo pembiri kusvika gumi nembiri, mitsetse yemavara ikozvino inobva kubva maviri kusvika gumi nematanhatu. Iwe unogona ikozvino kushandisa nhamba mbiri kupedzisa mutsara (kureva 15 uye 16 kana 3 kana 2). Pano, zvakare, une mabhodhi emitambo akasiyana, nokuti pane maviri pasi pemitsara nhamba dzerombo. Kana nhamba yemhanza yakakungurutswa nedhayisi jena, munhu ane nhamba yemhanza iyi pabepa ravo anogona kuishandisa. Kubheja nhamba yerombo rakanaka kunobvumira kuti muchinjikwa uitwe mumutsara uine michinjikwa mishoma. Uyu unofanira kunge uri muchinjiko uri padyo uye nhamba dzakasvetuka hadzifanirwe kuyambutswa.
Kana ukayambuka nhamba yerombo, haugone kuyambuka huwandu hwemadhasi machena. Saka munhu anoshanda anogona kuramba achiita michinjikwa miviri. Nhamba dzemhanza dzinogonawo kuoneka mumutambo wese kushandiswa kakawanda; kuti zvirege kupedzwa.
Qwixx Longo inonakidza kana iwe wakatamba mutambo unozivikanwa kakawanda uye uchida mamwe mashoma akasiyana. Nekuda kwemadhaisi ane mativi masere, minda kazhinji inofanirwa kusvetuka, asi kune zvakare michinjikwa yakawanda uye mapoinzi anofanirwa kuunganidzwa. Nhamba dzerombo rakanaka chinhu chinonakidza, asi dzinowedzerawo rombo rakanaka. Mukutenderera kwangu kwemutambo, nhamba dzerombo dzakatenderedzwa nekasiyana frequency (fungidziro yangu, pasina kuverenga kwemasvomhu), izvo zvakapa vamwe vanhu mukana mudiki.
NSV - 5301 - QWIXX - Natureline - plastiki-isina & inoenderera... * 10,19 EUR tenga
Kare Safemoon: Crypto purojekiti inoshandisa Minecraft senge padivi
Inotevera Robinson Crusoe: Pfuma chipfuva izere nezvinhu zvekusimudzira
Persona 5 Strikers - Kuzivisa zviri pamutemo zita reMusou rekuMadokero
Blightbound: Dungeon crawler yevazhinji mafani akaburitswa
Playstation 5 inogona kufanorongerwa: Asi pane kubata ...
Roccat Vulcan TKL Pro: Kiyibhodhi yemitambo ikozvino zvakare mune chena